कहाँ जान्छन् ? हराएका, चोरिएका वा लुटिएका मोबाइलहरु, उजुरी गर्ने कहाँ – आइसिटी खबर:सूचना सञ्चार तथा प्रविधि खबर ICT Khabar.com : No.1 Tech INFO ICT News Site
Home / आइसिटी न्युज/टेक अपडेट / कहाँ जान्छन् ? हराएका, चोरिएका वा लुटिएका मोबाइलहरु, उजुरी गर्ने कहाँ
ICT Khabar/आइसिटी खबर May 18, 2019	आइसिटी न्युज/टेक अपडेट, आइसिटी रिपोर्ट, शिक्षा/चेतना, समाज खबर Leaveacomment 282 Views
अहिलेका स्मार्टफोनको आकार ठूलो हुने तथा फोटो खिच्ने, कुरा गर्ने तथा गेम खेल्ने क्रममा अधिकांश समय मानिसले प्रयोग गरिरहने भएकाले कतै छोडिने वा खल्तीबाट खसेर पनि हराउने सम्भावना बढ्दै गएको छ । साथै महंगा र आधुनिक फोनहरुको राम्रै मूल्य पर्ने भएकाले बिक्री गर्ने उद्देश्यले व्यक्ति वा गिरोहले नै पनि भिडभाड सवारी साधन तथा एकान्तमा भेट्दा लुट्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ ।
यसरी हराएका, चोरिएका वा लुटिएका मोबाइलहरु आखिर जान्छन् कहाँ ? भेट्ने चोर्ने वा लुट्नेले आफै चलाउँछन् या बिक्री गर्छन् ? भने कुन माध्यमबाट गर्छन् ? त्यस्ता सामानका ग्राहक कस्ता हुन्छन् ? उनीहरुले जानी जानी किन्छन् वा कम मूल्यमा झुक्याएर बेचिन्छ ?
हराए वा चोरी भएमा उजुरी गर्ने प्रकृया के कस्तो छ ? उजुरी गरेपछि भेटिने सम्भावना कत्तिको छ कति समय लाग्छ प्रकृया झण्झटिलो छ या सहजै भेट्टाउने वातावरण छ ? यी र यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरु हामी सबैका मनमा उब्जिन सक्छ ।
– साजन सुबेदी/Ujyaaloonline
कति हराउँछन् मोबाइल ?
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तथ्यांक हेर्ने हो भने एक महिनामा कम्तीमा एघार सयदेखि सोह्र सयसम्म मोबाइल हराएको रेकर्ड छ । यो तथ्यांक महानगरीय प्रहरी परिसरको मोबाइल खोजतलास शाखामा रीतपूर्वक आएका उजुरीहरुको मात्र हो । हराएपछि उजुरी गर्ने निकाय पनि छ र उजुरी गर्दा भेटिने सम्भावना पनि छ भन्ने थाहा नै नभएका र थाहा भएर पनि उजुरी गरे पनि हराइसकेको माल भेटिने होइन भनेर प्रकृयामै नजाने प्रयोगकर्ता त झन् कति होलान् ।
उजुरी कहाँ गर्ने ?
मोबाइल हराएको, चोरी वा लुटपाट भएको थाहा पाउनेबित्तिकै सम्बन्धित सेवा प्रदायक संस्थाबाट सिम ब्लक गर्न लगाएर महानगरीय प्रहरी महाशाखा त्रिपुरेश्वरको मोबाइल खोजतलास शाखामा मोबाइलको आईएमईआई नम्बर वा मोबाइलको बक्स र मोबाइल खरिद गरेको आधिकारिक बिलसहित निवेदन दिनुपर्छ । दर्ता नम्बरसहितको चिट दिएर कम्तीमा १५ दिनपछि सम्पर्क गर्नुपर्छ ।
दैनिक रीत पुर्याएर दैनिक रुपमा आएका उजुरीहरु आधिकारिक आईएमईआई ट्रेस गर्ने अनुमतिका लागि अदालतमा पठाइन्छ र अनुमतिको तोक लागेर आएका आईएमईआई ट्रेस गर्न सहयोगका लागि प्रयोग भएका सिमअनुसार सम्बन्धित टेलिकम संस्थाहरुसँग समन्वय गरी चोरिएका वा भेटिएका मोबाइल सेटहरु प्रयोग भइरहेको खण्डमा प्रयोगकर्तालाई परिसरमा हाजिर गराइनुका साथै मोबाइल सेट जफत गरी सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई खबर गरी हस्तान्तरण गरिन्छ ।
Previous ‘सेकेण्ड ह्याण्ड’ मोबाइल किन्दै हुनुहुन्छ ? जेल सजायसम्म हुनसक्छ
Next साइबर आक्रमणका ह्याकरले लाखौं डलर कमाउँछन् यसरी